Abu-Yasir Al-Muqdishi Al-shabaab baa dilay Sh.Dr Axmed Xaaji iyo Sh C/qaadir Nuur Faarax [Dhagayso]
August 26, 2013 - Written by Editor
Baraawe:-Waxaa mar kale uu Abuu-Yaasir Al-Muqdishi ka hadlay qaabkii loo dilay Ibraahim Xaaji Miicaad Ibrahim Afgaani iyo Macalin Burhaan , isagoo markaan xogtaan ku bixiyey qoraal ku qoran afka carabiga iyo codba lana soo dhigay شبكة الجهاد العالمي oo bar internet ah oo taageerta ururka Al-qaacid iyo kooxaha ku fikriga ah. Halkaan ka eeg fariinta oo Afsoomaali ah.
Abu-Yasir Al-Muqdishi ayaa qoraalkaan ku qoran afka carabiga iyo codka la socda waxaa uu yahay mid uu ku doonayo in fariinta uu ku gaarsiiyo ururada kale ee ku biiray Al-qaacid si uu warbixin uga siiyo xaalada ay cagta saareen madaxda ururka Al-shabaab oo uu ugu horeeyo hogaamiyaha ururkaas Axmed Cabdi Godane.
Abu-Yasir Al-Muqdishi ayaa waxaa uu wax aan jirin ka soo qaaday hadalkii uu jeediyey Cabdi casiis Abu Muscab oo ah afhayeen ka dhinac howl galka ururka Al-shabaab oo shir jaraa’id oo uu qabtay ku sheegay in labad wadaad ay dhinteen markii ay diideen in ay isku dhiibaan ciidanka al-shabaab oo ay dagaalameen saasna ay ku dhinteen.
Abu-Yasir Al-Muqdishi ayaa waxaa uu ku celiyey qaabka loo dilay Ibrahim Afgani iyo Macalin Burhaan isagoo sheegay in si bareer ah loo dilay labad wadaad oo iyaga oo hubeys nayn si dhagar ah loo dilay ka dib markii hanjabaadyo badan loo soo dirayey ka hor intaan la dilay.
Abu-Yasir Al-Muqdishi ayaa xusay in ururka Al-shabaab ay banaysteen dhiiga culimada iyo madaxda ururka Al-shabaab oo qaar la dilay , qaar kale ay xiran yihiin ,halka qaar kalena ay ka carareen degaanada ay xukumaan ururka al-shabaab oo weli lagu raad joogo.
Abu-Yasir Al-Muqdishi ayaa qoraalka iyo codka warbixintiisa ku sheegay in Al-shabaab ay laayeen oo dhiigooda ay banaysteen culimadii dalka Soomaaliya isagoo xusay in ururka Al-shabaab ay dileen Sh. Dr Axmed Xaaji Cabdiraxmaan Allaha u naraxiistee arrinkaas oo culimada iyo beesha uu ka soo jeeday Sh Dr axmed Xaaji ay dilka Shiikh ku eedeeyeen ururka Al-shabaab gaar ahaan kooxda amniyaadka ee ka amar qaata Axmed Cabdi Godane.
Waxaa kale oo fariintiisa uu ku sheegay Abu-Yasir Al-Muqdishi in ururka Al-shabaab ay ku dileen Sheekh.Cabdulqaadir Nuur Faarax xili uu ku guda jiray Salaada Casar isagoo Rukuucsan kuna tukanayey Masjid Beder ee magaalada Garoowe. Halkaan ka Akhriso qoraalka fariinta ee Abu-Yasir Al-Muqdishi oo Af-carabi ku qoran
Abu-Yasir Al-Muqdishi ayaa ku eedeeyey ururka Al-shabaab iyo hogaankooda Axmed Cabdi Godane:-
1. In Hogaanka Al-Shabaab ay diideen in ay ku dhaqmaan Shareecada Islaamka
2-In Al-Shabaab ay ceyriyeen Mujaahiin dalka u yimid Jihaad ayna u gacan galeen gaalo.
3-In Xabsi , dilal gaadmo ah ,gaaleysiin ay kula kaceen madaxdood iyo culimadii u naseexaysay
4-Dagaal dicaayad ah ay ku qaadeen madax iyo culumo naasixiin ah oo ka tirsan Al-shabaab.
5-Dilka iyo Gaaleysiin culumo iyo xarakaad Islaami ah oo ka fikir duwan ururka Al-shabaab
6–In jagooyinka Muhiimka ah ee laga fogeeyey culumada uu ku sheegay (Abu Yasir) Rabaaniyiin iyo Mukhlisiin waxaan kale oo uu sheegay in khudbado iyo duruus laga joojiyey culumo badan oo nasiixooyin u gudbiyey Ahmed Godane.
Hoos ka Dhagayso Fariintii Abu-Yasir Al-Muqdishi oo afcarabi ah
[audio:https://halgan.net/Mp3/abyyaser.mp3] ama Halkaan ka dhagayso
Source :مؤسسة الزيلعي للإنتاج الإعلامي